अलविदा लछिन दाइ – दाङ खबर
अलविदा लछिन दाइ
टीका बस्नेत-आज फेरि नजानिँदो किसिमले मन भारी भइरहेको छ , विगतले आफैलाई झस्काइरहेको छ । एकतमासले मन बिथोलिँदै छ । स्मृतिको क्यानभासभित्र विगत सल्वलाइरहेको छ । सडकमा भौंतारिदै छु । किनकिन आज मलाई घोराही बजार निकै उदार र उराठिलो लाग्दैछ । सधैँझैं चलह–पहल देखिने तुलसीपुर चोक किनकिन आज सुनसान ठान्दैछ यो मन ।
उता परबाट एउटा किशोर भाइ चिच्याउँदैछ– ए दाइ यता–यता । कहाँ जाने तपाई ? बस्, यस्तै छ यहाँको परिवेश । मानिसको दैनिकी पनि कति विचित्र किसिमको छ है । मान्छे बाँचुञ्जेल सर्वविजेता ठान्छ आफूलाई, आफ्नो कामलाई, अनि आफ्नो कर्तव्यलाई । र त दिनरात लागिरहन्छ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्र्न । जब मानिसले प्राणपखेरु छाड्छ, जान्छ कहिल्यै नफर्कने गरी अन्तै कताकता, तबमात्र उसको महत्व झल्कन्छ समाजमा, उसले देखाएको बाटोमा हिड्न आवस्यक ठान्छ समाज । समाज वनावटी रुपमा मात्र उसको अस्तित्व स्वीकार्छ, समाजमा उसले गरेका काम र कीर्तिको बारेमा लामै फेहरिस्त तयार पार्छ , अनि गुलिया भाषण छाँट्छ समाज । हो यस्तै छ हाम्रो समाजको नियति ।
समयले पनि कति छिट्टै पोथ्रा फेर्दो रहेछ हगि । घोराही उपमहानगरपालिका वडानम्वर १६ का वडाध्यक्ष लछिनप्रसाद बुढामगरले छाडेर गएको पनि १३ दिन बितिसकेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन जयूले लछिन दाइका नाममा श्रद्धाञ्जलीमा शब्दहरु लेख्न अह्राएको पनि थुप्रै दिन भइसकेछ । लेख्न बस्दा धेरै दिनदेखि हातहरु चल्न मानेका छैनन् । सबैभन्दा नजिकिएको मान्छे, सुख, दुःखका धेरै समय गुजारेको मान्छेका नाममा श्रद्धाञ्जली लेख्नु साँच्चिकै कठिन कार्य रहेछ । जुन सकिनसकी लेख्दैछु ।
लछिन दाइका नाममा श्रद्धाञ्जलीका शब्दगुच्छा अर्पण गर्दैगर्दा किन–किन मन अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । सम्हाल्दा–सम्हाल्दै पनि मन भक्कानिदै छ, अश्रुहरु बगिरहेका छन् । शब्दहरु पोखिन मानिरहेका छैनन् । र पनि लेख्दैछु–लछिन दाइका नाममा श्रद्धाञ्जलीका शब्दगुच्छाहरु ! गणतन्त्र दैनिकको कार्यकारी सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै घोराही बसाईका क्रममा लछिन दाइसँगको सम्बन्ध सुरु भएको थियो । ठूलो स्वरले नबोल्ने, जस्तोसुकै आवेगमा पनि मुसुक्क मुस्कुराइदिने लछिन दाइको स्वभावले तानेको थियो मलाई । रत नजिकिएको थिएँ उहाँसँग । जीवनका सुखद् या दुःखद् दुवै क्षणमा नजिक हुन्थ्यौं–हामी ।
असल राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्ने गुणले भरिएका लछिन दाइसँग तत्कालिन घोराही नगरपालिकाका धेरैजसो वडामा पुगेका स्मरणहरु अझै जीवित छन् । जनताको घरदैलोमा पुग्दा सधैँ आत्मियता प्रदर्शन गर्ने लछिनलाई स्थानीयहरु, पार्टी कार्यकर्ताहरु साँच्चिकै लछिनको ठान्ने गर्दथे । नेकपा एमालेको घोराही नगर कमिटीको अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा उहाँले निर्माण गरेको सांगठनिक जगमा टेकेर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोराहीका धेरै वडामा नेकपा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । एमालेका कमिटी नभएका धेरै टोलहरुमा लछिन दाइको उपस्थितिमा कमिटी निर्माण भएका थिए ।
घोराही–१६ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै लछिन दाइले निर्वाचनका प्रतिवद्धता एकवर्षमा पुरा गरेर असल नेतामा हुनुपर्ने गुण देखाइसक्नुभएको छ । र पनि उहाँलाई कहिल्यै पनि पत्रिका हेडलाइन बन्ने रहर जागेको मैले पाएन । दाङका धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरु कार्य प्रारम्भ भएको समाचार बन्दै हराउँदै गर्दैगर्दा लछिन दाइले आफ्नो वडालाई खरको छानोमुक्त वडा घोषणा मात्र गर्नुभएन । टिनको छानोमुनि बस्ने ४६ परिवारको सपना पुरा गर्नुभएको थियो–त्यो पनि एक वर्षभित्रै र पनि उहाँ कहिल्यै चर्चा खोज्नुभएन । मैले अहिलेसम्म पनि भुलेको छैन खरको छानोमुक्त वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम । जुन दिन आँखाभरि हर्षका आँशु बगाउँदै लछिन नभएको भए हाम्रो जिन्दगी खरको छानोमुनि बित्ने थियो भन्दै लछिनलाई आशीर्वाद दिने बृद्धबृद्धाहरुको लाइन नै थियो ।
एक वर्षको समयावधीमा वडावडासम्म बाटो पु¥याउने, योजना माग्न घरघर पुग्ने लछिन दाइ जनताहरुप्रति उत्तरदायी बन्दाबन्दै निर्दयी कालको मुखमा पर्नुभयो । उहाँका सहयोद्धाहरुले उहाँले बुनेका योजनाहरु मर्न दिनुहुँदैन । सबै पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । यो नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धासुमन हुनेछ । व्यक्तिगत लुछाचुँडीमा अल्झिएर जनआकांक्षा पुरा नगर्ने प्रवृत्ती मौलाइरहँदा जनताका आकांक्षा पुरा गर्ने गरी घोराही–१६ का जनप्रतिनिधिहरुले कार्यसम्पादन गर्नु अवश्इक छ । यति भएमा मात्रै लछिन दाइप्रति श्रद्धाजली अर्पण गरेको ठहर्नेछ ।
Prev‘बोनम्यारो’ पीडितको कथा
Next२० वर्षमा बन्यो बसपार्क
पोखरामा फेरि अर्की किशोरी मृत अवस्थामा फेला